Ku joog badqab aqbaarta saxda ah | USAHello
Macluumaadka koronafayras > Ku joog badqab aqbaarta saxda ahWaxaa tarjumay Translators without Borders
waxaa jiro macluumaad badan oo ku saabsan koronafayras. Ma taqaanna waxa runta ah iyo waxa aan runta ahayn? USAHello waxay heysaa macluumaad ka imaday illo aan ku kalsoonaankaro. Daawo fiidiyowyadeena ku saabsan quraafaadyada koronafayras. Baro marin- habaabinta koronafayras si aad u badqabto.
Waa maxay waxa runta ah iyo waxa aan runta aheen ee ku saabsan koronafayras?
Daawo fiidiyowyo ka socda USAHello shaqaalaha, mutdawaciinta iyo xubnaha guddiga ay u fahmaan waxa runta ah iyo waxa beenta ah ee kusaabsan koronafayras.
Fiidiyowyada USAhello waxaa lagu heli karaa luuqado badan!
Fiiri fiidiyowgaan oo Carabi ah
Muuqaalkan ka daawo Burmese
Muuqaalkan ka daawo Shiinays (Cantonese)
Ka daawo fiidiyowgan Shiinaha (Mandarin)
Muuqaalkan ka daawo Creole
Muuqaalkan ka daawo Farsi
Muuqaalkan ka daawo Faransiiska
Hoos ka daawo muuqaalkan Hindi ah
Muuqaalkan ka daawo Kinyarwanda
Hoos ka daawo fiidiyowga Kuuriyada
Ka daawo fiidiyowgan gudaha Nepali
Muuqaalkan ka daawo Boortaqiiska
Muuqaalkan ka daawo Ruushka
Aflaantaan ka daawo oo Ingiriis ah
Muuqaalkan ka daawo Isbaanish
Muuqaalkan ka daawo Sawaaxili
Muuqaalkan ka daawo Tagalog
Muuqaalkan ka daawo Tigrinya
Muuqaalkan ka daawo Afka Turkiga
Muuqaalkan ka daawo Yukiandha
Muuqaalkan ka daawo Fiitnaam
Ka warhaay marin habaabinta koronafayras.
Marin habaabinta waa qiyaano. badanaa, dadka marin habaabiyo dadka kale waxay isku dayaayaan inay qayaanaan oo lacagtoodana xadaan. mararka qaar marka aan baqeyno way adagtahay inan sheegno waxa dhabta ah iyo waxa aan ahayn. Halkaani waa qaar Marin-habaabin kamid ah oo aan dhamaanteen ubaahanay inaan wax ka ogaaano!
jeegagga dowladda dadka logu deeqo
haddii aad ka hesho qoraal,iimeyl ama taleefanka qof ka soo wacay oo ku dhaho dowladda ayaan la joogna waxaana hayaan jeegagga dowladda dadka logu deeqo koronafayras ha siinin wax macluumaad ah. Dowladda haddii ay u baahantahay macluumaadka bangigaaga waxay sameeyneesaa meel qad amni leh si aad u geliso webside kasoo ku dhamaada .gov. kuuma soo wacayaan macluumaad. wax badan ka baro caawinta kasocoto dowladda.
internetka ayaa Soo bandhig daawooyin, talaallo iyo qalabka baarintaanka
iska indha-tir Soo bandhigyadaan hana u gudbin dad kale. waa ay jiraan su,aalo khadka tooska ah oo aad arkeysid haddii ay astaamahaga u dhigmaan fayraska , laakiin kuwani ma ahan baaritaan. Ma jiraan baaritaano khadka tooska laga helo ama daawooyin ama talaallo COVID-19. haddii aad u baahantahay baritaan, wac waaxdaada caafimaadka dadweynaha.
Goobaha baaritanka been abuurka
Goobo bariitaan been-abuur O koronafayras ah ayaa kasoo muuqday qaar kamid ah magaalooyinka USA. Kuwaani waa adeegyo aan amaan aheen oo sharci daro ah. Waxaad ka heli kartaa macluumaad runta ah oo saabsan baaritaanka koranafayras degalka waaxdaada caafimaadka dadweynaha. Soo hel waaxdaada caafimaadka dadweynaha.
Badeecooyinka been-abuurka ah
Qaar ka mid ah xayeysiistayaasha internetka iyo iibiyaasha ayaa sheegaya inay hayaan alaab ay kaaga ilaalinayaan cudurka koronafayras. Waxay bixiyaan jeermis-dileyaal, maaskaro, iyo sahay kale. Qaar badan oo ka mid ah badeecadan iyo bogaggan internetka waa been abuur. Soo ogow sida si badbaado leh looga dukaameysto internetka.
Marin-habaabinta wacitaanka mashiinada
wacitaanka mashiinada waa marka ay kusoo Wacdo mashiin taasoo kuula hadleyso sida qof. Haddii aad maqasho fariin duuban marka aad ka jawwabto taleefoonka, jar. ha riixin wax nambar ah ama ha siinin wax macluumaad ah.
siyaabaha looga fogaado aqbaarta xun
inna badan dadka uma dan laha inay faafiyaan aqbaar xun laakiin waxaa jira aqbaar badan oo aan sax aheen oo ka imaaneyso xibanaha bulshada. Waxaan dhamaanteen gacan ka geysan karnaa fifinta macluumaadka wanaagsan bedelkeeda!
ka taxdir baraha bulshada: ka fikir intaadaan la wadaagin!
Baraha bulshada waa aalad weyn oo xiriirada asxaabteena iyo qooskeena qayb weyn ka qadato, anagao oo ku dhaqmeeno kala fogaashaha bulshada. Nasiib darro, baraha bulshada inay sidoo kale ay ah aalad marin-habaabin iyo macluumaad qaldan, sidaa darteed aad uga taxadir waxa aad wadaagayso. Waa muhiim inaadan dib dhigin ama ula waadaagin adiga oo aan hubin inay aqbaarta run tahay. wanaag ayad u adeegsan kartaa baraha bulshada adigoo la wadaagaayo fariimo saxan!
Ka hel macluumaad wanaagsan luuqaddaada
aqbaar badan ayaa ku jirto intarneetka iyo baraha bulshada. dhamaantood run ma ahan. Way adkaan kartaa in aad luuqadaada ka hesho aqbaar wanaagsan. Waa kuwaan websaydhyada aad ku kalsoonaan karto:
xarumaha xakameeynta iyo ka hortagga cudurada (CDC) waa hay,adda ugu weyn caafimaadka ee USA waxay haysaa aqbaar ku saabsan koronafayras oo ku qoran Ingriis , Isbaanish , jeyniis , fiitnaam , kuuriyaan ,iyo luuqado kale.
hay,adda caafimaadka adduunka (WHO) waa hay,adda ugu weyn caafimaadka ee caalamka. waxay haysaa aqbaar ku saabsan koronafayras oo ku qoran Ingiriis , Carabi, jeyniis ,faransiis , raasshiyaan ,iyo Isbaanish.
Mashruuca Qormooyinka caafimaad ee COVID-19 waxuu leeyahay qoraal xaqiiqeed ku qoran 30 luuqadood, oo ay ku jiraan aqbaarta haween uurka leh iyo dhamaan da, kasto caruurta.
Xafiiska caalamiyeenta Kentucky wuxuu caawiyaa dadka Ameerikaan ah ee cusub. waxuu leeyahay qoraal-xaqiiqyeedyo ku saabsan COVID-19 iyo kala fogaashaha bushada kuwaasoo ku qoran 22 luuqadood.
Degmada Multnomah ee Oregan waxay laga heya macluumaad wanaagsan iyo muqaalo fiidiyow ku diyaarsan 24 luuqadood oo dadka soo galootiga ah leeyahiin. Boggan waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaadka nadiifinta adeegga cuntada iyo makhaayadaha oo ku qoran 9 luqadood.
Waa xili adag oo cabsi leh. Dadka marka baqaan, way iska horimaadaan. Dhaleeceynta waxay dhaawacaysaa qof walba oo bulshada ka mid ah iyadoo abuureysa cabsi iyo kala qeybin. waxay dhaawac u geesan karaa kuwa la bartilmaameedsay.
Uma baahnin inan midab takoorno Ameerikaanka Eeshiyaanka ah, Shaqaalaha gurmadka degdega iyo kuwa caafimaadka, dadka qaba COVID-19, ama qof kastoo kale. Feeyraaska wax ma takooro. Ma jiro koox ka tirsan Mareykanka oo u badan inu ku dhaco ama ku faafo COVID-19 marka loo eego kuwa kale.
Aad bay muhiim u tahay inaan dhamaanteen sameeyno qeebteena si aan u barano macluumadka dhabta ah si looga fogaado kutiri-kuteenta iyo baqdinta keenta faquuqa iyo midab-takoorka. Amaan ayan nanay haddii aan wada shaqeeyno!
ka ogow aqbaarta ku saabsan faquuqa ka socdo CDC.
Aqbaartan waxay ka imaaneysaa illo lagu kalsoonaankaro, sida UNICEF, Xaruumaha xakameenta iyo ka hortagga cudurada iyo Hay,adda caafimaadka aduunka. USAhello ma bixiso talo sharci ama talo caafimaad, mana jiro wax aaladeena ah oo logu talo-galay in loo qaato talo sharci ama caafimaad.
Miyaad qabtaa wax su’aalo ah oo ku saabsan sida loo helo macluumaadka runta ah? waad awoodi kartaa [email protected].